HVM : Vonona hiatrika fifidianana -
AccueilRaharaham-pirenenaHVM : Vonona hiatrika fifidianana
Notanterahina omaly, tetsy amin’ny biroa foiben’ny antoko Hery Vaovaon’i Madagasikara na HVM, etsy Antanimena, ny fivoriamben’ireo mpandrindra sy ny birao iraisain’ireo kaominina sy ny “coach” manerana ny Faritra 22 eo anivon’ny antoko eto Madagasikara. Saika nanana solontena tamin’izany avokoa ny Faritra 22. Tonga nanokatra izany fivoriambe izany ny teo anivon’ny birao nasionaly notarihin’ny filohany sady filohan’ny Antenimeran-doholona, Rivo Rakotovao.
Araka izany, nanambara ny filoha nasionalin’ny HVM tamin’ny lahateny nataony nandritra ny fanokafana fa tsy antoko-na mpinamanamana ny HVM fa rafitra ara-politika iray lehibe, izay natsangan’ny Filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina. Voalaza fa rafitra tsy mibaiko Fitondrana fa manohana sy manatanteraka ny asa sosialy sy asa fampandrosoana mifanaraka amin’ny tetikasan’ny Filoham-pirenena.
Ankoatra izay, notsindrian’i Rivo Rakotovao fa tsy matahotra ary vonona hiatrika ireo fifidianana, Filoham-pirenena sy solombavambahoaka, ny antoko HVM. “Izao fivoriambe sady fihaonambe izao no atao satria hiatrika fifidianana isika, hiatrika fifidianana ny vahoaka. Zava-dehibe tokoa izany ho an’ny firenena. Vonona amin’izany ny antoko HVM”, hoy ity filoha nasionaliny ity.
Nambarany fa efa tafapetraka any amin’ireo Faritra 22 sy kaominina maro ny rafitra tao anatin’ny roa taona mahery. Tamin’izany indrindra no nanipazany hafatra ho an’ireo mpizaika (mpandrindra rezionaly, birao iraisan’ny kaominina, serasera, sns) fa mila mandresy lahatra ny mponina any amin’ny faritra misy azy tsirairay izy ireo. “Mila miasa isika, anjarantsika ny manentana ny olona eny amin’ny misy antsika tsirairay avy. Anjarantsika ihany koa ny manabe azy ireo amin’ny fampahalalana vaovao mahakasika ny firenena sy ny zava-bitan’ny antoko sy ny Fitondram-panjakana”, hoy izy.
Nanambara kosa tetsy andaniny, ny lehiben’ny Faritra Analamanga sady mpandrindra rezionalin’ny HVM Analamanga, Ndranto Rakotonanahary, fa ilaina ny fivoriambe tahaka izao mba hifanakalozan-kevitra, indrindra ho amin’ny fanatanterahana ny vinan’ny Filoham-pirenena amin’ny “Fisandratana 2030”.
Hisy ihany koa ny hetsika “Rodoben’ny Fisandratana” hotanterahin’ny antoko HVM anio etsy amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena. “Hampiseho ny herintsika isika amin’io hetsika”, hoy i Rivo Rakotovao teny am-pamaranana.